Forum serasera malagasy Nahafinaritra ny Fitsangatsanganana teny Varahina - Dinika forum.serasera.org
Nahafinaritra ny Fitsangatsanganana teny Varahina
Fitohizan'ny hafatra : Nahafinaritra ny Fitsangatsanganana teny Varahina
fyjl - 30/08/2004 13:44
Amiko manokana dia nahafinaritra tokoa aloha iny fitsangatsanganana indray mitoraka iny e! Satria na ilay toerana aza dia amoron-drano ary tsara rivotra tokoa sady madio.
Nahafinaritra ny fiarahana satria niarahana avokoa ny zavatra rehetra.
- Nanao ny fifankahalalana aloha
- Tsy lany ny sakafo satria maro ireo namana nitondra mihoatra noho izay tokony ho azy irery
- Nihirahira ihany koa ary tsy voafetra ny ny karazan-kira natao.
- Tao ny nazoto nandihy satria faly
- Nilalao ihany koa, toy ny daomy, jeu de carte.
- Nitafatafa sy nidinidika momba ny fikambanana ary momba ny fiainana an-davan'andro.
- Naka sary ihany koa ary isaorana an'i Avylavitra nitondra fitaovana ary i Ravatorano hamadika izany ho numerique hahafahantsika rehetra mahita azy
- Tao koa ny nanao resaka anjorony izay heveriny fa mety hahasoa azy.
- Nifanolotra n° téléphone sy adiresy ireo tsy nifankafoy.
- Efa nitsiry sahady ny hevitra ny hiaonana @ faran'i herin'andro zao.
- Nahafinaritra koa ireo fanalan'azy tao anaty fiara iombonana toy ny hirahira sy ny fifanadalàna madinidinika. Toy ny 1mn dia tonga teny Ambohijatovo ny fiara.
- Raha fehezina dia t@ fitiavana tanteraka izany rehetra izany ka satry tsy hisaraka ihany nefa moa tsy maintsy e!
- Mino sy manantena aho fa hihatsara ary hihamafy orina hatrany ny fifankatiavatsika namana e!
MISAOTRA ANTSIKA REHETRA EEEEEEE!
yonikafopl - 30/08/2004 17:12
Rehefa faly ianareo dia izahay no finaritra e!!!!
Tohizo ny fifankatiavana fa tsara e!! :-* :-*
ralay - 30/08/2004 20:27
Tsara tokoa izany ary tena mampitsiriritra anay aty lavitra ka ny hirariana dia hitohy hatrany ary any andro any volana hisy ny fihaonan'ny namana eran-tany ka ho maro an'isa tokoa isika @ zay andro izay.
Hirariako koa ny haha-masaka ny fihaonanan'ny namana aty ivelany ka ho tonga marobe isika.
fanja1 - 31/08/2004 08:18
Dia faly be maheno ny hafalianareo rehetra any! Dia antenaiko fa tsy ho ela kou ny anay aty ivaleny!
Ho ela velona ny serasera :-*
herylo - 31/08/2004 15:17
Marina fa nahafinaritra ny tany nefa dia somary vitsy ihany ny tonga.Raha ny fanirina moa dia iska namana eto TANA no tsra raha miaraka @ zavatra toy ireny fa dia antenaina fa ho tonga ianareo @ hetsika atao manaraka na dia ny hoe hifankahita tava fotsiny aza.
Antenaina angamba fa ho avo efatreny noho ny tany isika @ manaraka.
fijo - 01/09/2004 21:33
raha mbola masiaka amiko i fanja dia tsy hoavy aho fa ho tonga fotsiny. :-D :-D :-D
six - 02/09/2004 15:47
niala tsiny fa ts tonga!
fijo> milay e! hihih
amour - 03/09/2004 07:06
Faly be za maheno hoe nahafinaritra ny fitsangatsanganana nataonareo, nefa saingy indrisy fa tsy nahare iny fisiany ny tenanay, kou iangaviana ho an'izay efa mahalala ahy mba hiteny amiko @ fivoahana @ manaraka.
De enga anie ka hitohy hatrany ny fifankatiavana ao @ serasera
hery - 04/09/2004 10:15
Amour> angamba ianao vao tonga vao haingana fa mitovy amin'io hafatra voarainao avy any amin'i admin io no nilazana io fitsangatsanganana io teto.
Mbola hisy filazana foana amin'ny manaraka e.
mozart - 04/09/2004 14:50
nahafinaritra aloha e! tena afa-po ary nalai-nisaraka ny namana rehetra! irariana mba hitohy ny fiarahana ary mba matotra le mpametrapetraka ireny! ho avy nefa avy eo tsy hita akory, samy manana ny ataony anie fa rehefa fiarahana de mba miaraka e!!!!! isaorana manokana MCZ t@ tatitra e! aleo mantsy asiana tatitra foana @ zay mitsiriritra zay tsy nandeha! ho ela velona ny namana serasera, hafa ihany ny tena namana!!!tsiky dia ampy
fijo - 04/09/2004 22:00
nisy mozika izany tany ry mozart?
rafilozofy - 08/09/2004 07:28
Mazotoa ianareo mitsangatsangana f'izahay angamba i-ndray mandeha isan-taona vao mba afaka manao izany raha ho afaka aza. Ndry!!!!
Misaotra ny mpikarakara, fa hita fa nahafa-po ny ankizy ilay izy. Irariana mba ho tsara kokoa hatrany ny fifaneraserana sy ny fiaraha-miasa sns... :!:
avylavitra - 08/09/2004 19:52
salut daholo nareo
Faly ny tenanay rehefa faly ny rehetra e!
Ny sary dia efa any am FyJL fa tena ialako tsiny noho ny fahasahiranako be amin'izao fotoana. Niezaka aho ny hanao tsara ka antenaiko fa hahita ny maminy ny rehetra e! Am manaraka indray
tsiperifery - 27/09/2004 15:03
Vao nahita ny fihaonana tao @ tahirintsary ny tenanay . Tsapa tokoa fa falifaly sy nitotorebika aok\_'izany ny namana tonga .
Tokony hanao fihaonana ara-panatanjahantena koa ianareo any entina hanampiana ny namana Ravatorano . hihihi
fijo - 27/09/2004 23:31
nahafinaritra tokoa ny nahita ilay sary ny fihaonana fa tena hafaliana no nameno ilay sary.ka dia mahereza e.
naritsimba - 28/09/2004 12:46
Aiza no ahitana izany sary izany fa tena tsy mahita ny namana eh?
fijo - 29/09/2004 23:17
mankanesa ao amin\_'ny namana dia jereo ilay hoe \_"tahirin tsary eo ambany ankavia.
bice - 30/09/2004 09:46
tsara de tohizo :-D
fijo - 30/09/2004 21:33
dia tongava koa ny sasany e
enc - 03/10/2004 17:53
rehefa samy faly ny rehetra dia mahafinaritra nyfifandraisana eo amin\_'ny samy mpikambana ka hirariana mba hahariritra hatramin\_'ny farany daholo
(l) dia mirary soa ho an\_'ny rehetra